FAQs - Tongxing Packaging Products Co., Ltd.
Ị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe n'ọtụtụ ụdị akpa kemgbe 2006.
Kedu ihe bụ akụrụngwa nke ngwaahịa gị?
The ihe bụ na-abụghị kpara akwa, na-abụghị kpara lamination, akwa, owu, kwaaji, naịlọn ma ọ bụ polyester ma ọ bụ ndị ọzọ.
Kedu ka m ga-esi nweta ụfọdụ sample?
Anyị na-asọpụrụ ịnye gị samples.
Kedu ka ụlọ ọrụ gị si eme gbasara njikwa mma?
Ogo bụ ihe kacha mkpa. Anyị na-etinye ihe kacha mkpa na njikwa mma site na mmalite ruo na njedebe.
Kedu onye ahịa ika ụwa gị?
Ha bụ Carrefour, coca-cola, Disney, Julies, Walmart na Zwilling.
Ee, anyị na-eji nkwakọ ngwaahịa mbupụ dị elu mgbe niile. Anyị na-ejikwa nkwakọ ihe egwu pụrụ iche maka ngwa ahịa dị ize ndụ yana ndị na-ebufe ebe nchekwa oyi kwadoro maka ihe ndị nwere mmetụta okpomọkụ. Ọkachamara nkwakọ ngwaahịa na ihe ndị chọrọ nkwakọ ngwaahịa na-abụghị ọkọlọtọ nwere ike ibute ụgwọ ọzọ.
Ndị na-ebunye akpa akwa ụlọ nkwari akụ, Ndị na-ebunye akpa Tote owu, Akpa owu,